orinasa mpanamboatra sakaosy maivana any China Beyin
Kitapo ho an'ny OEM namboarina avy any Shina
Kitapo puce isan-karazany no azo vokarina, toy ny paosy mijoro, kitapo fisaka, kitapo ambany ambany, sns, mety ho etona glassy na ambonin'ilay matt, misy na tsy misy zipper na varavarankely, ny MOQ dia mifototra amin'ny haben'ny kitaponao.
Kitapo ambongadiny plastika avy any Chine
Popcorn, ho iray amin'ireo tsakitsaky malaza, dia raisina an-kalalahana any Eropa sy Amerika. Raha ho an'ny kitapo popcorn manokana dia aleon'ny olona toy ny fotony ny loko mavo satria ny mavo no loko tena ankafizin'ny popcorn. Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny olona dia tia kitapo tombo-kase ambadika toy ny sary etsy ambany. Ho an'ny kitapo popcorn mahazatra, ny olona dia te hanana azy io amin'ny endrika manjavozavo, PET / FOIL-PET / PE, na dia misy kitapo popcorn mila fenoina azota aza, dia ny PET / FOIL-PET / CPP no tsara kokoa. Momba ny hateviny, satria maivana be ny popcorn, amin'ny ankapobeny dia mikrôona 60 no ho ok ary ampy ampiasaina, saingy maro ny olona te hanao ny kitapony hanana kalitao avo kokoa, noho izany dia mampiasa microns 80, 100 microns, 120 microns ary avo kokoa aza izy ireo.
Kitapo jerky hendrika mirindra namboarina
Ny ankamaroan'ny olona dia mbola aleony mijoro ny kitapo biltongona hidy zip, tsy misy olana amin'ny foil na tsy misy foil, plastika na taratasy, ny ankamaroany dia tian'izy ireo matt ambonimbony, zipper, misy lavaka euro sy varavarankely. Hatevina avy amin'ny mikrô 80-150, mazàna 100 na 120 mikrô dia ampy ampiasaina.
Kitapo sôkôla avo lenta any Sina
Ho an'ny kitapo sôkôla, ny ankamaroan'ny olona dia tia karazany 2, mijoro kitapo hidy zip ary kitapo gusset eo anilany. Tsy azonao atao ny milaza fa tsara kokoa ny lava, fa raha kely ny fahaizany, mandehana miaraka amin'ny kitapo mijoro, fa raha manana fahaiza-manao lehibe kokoa kosa, ny kitapo gusset amin'ny lafiny no ho safidy tsara kokoa.
Mpamatsy kitapo vatomamy any Sina
Rehefa manao kitapo vatomamy ianao dia mila fantatrao aloha hoe iza no hividy anao vatomamy, avy eo mila manao endrika mety hahaliana ny mason'izy ireo ianao. Ohatra, ny ankamaroan'ny ankizy dia tsy mahazaka ny fakampain'ny vatomamy, avy eo ny fomba fanaovana ny ankizy ho toy ny vatomamy anao, ataovy ny kitapo vatomamy mety, cos tsy misy mahalala izay ao anatiny alohan'ny hanokafany ny kitapo. Inona no tian'ny ankizy? Loko tsara tarehy, biby, voninkazo, zavatra tsara rehetra.